Xisbiga UCID ee Somaliland ayaa wada-hadalada DFS iyo Somaliland ku tilmaamay go’aan qaran – Kalfadhi
Xisbiga UCID ee Somaliland ayaa wada-hadalada DFS iyo Somaliland ku tilmaamay go’aan qaran
Gudoomiya Xisibiga UCID ee Somaliland ayaa sheegay in uusan go’aan qaran ahayn hadalo kasoo yeeray madaxwaynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulkaas, Baashe Maxamed Faarax. Gudoomiye Faysal waxa uu sheegay in madax-banaanidoodu ay ku xiran tahay in ay lahadlaan Dowladda Federalka ah ee Soomaaliya. Wuxuu sheegay inuu hadalka madaxawaynuhu ahaa mid ay cadifadi ka keentay, sida uu warka u dhigay, halka uu sheegay in Gudoomiye Baashe uu ku hadli karo go’aanka baarlamaanku gaaray oo kaliya.
“Madaxwaynihii xilgaas Siilaanyo ayaa noo yeeray, anagoo ka kooban sadex xisbi. Maxaynu yeelnaa buu yidhi, kadib guddi baa loo saaray kasoo tala bixiya, oo saddex xisbi ah. Waxaanu ku soo tala bixinay in aan shirkaa ka qayb-galno, laakiin sharuudaan ku xirnay” ayuu yiri Faysal Cali Waraabe.
Isaga oo maanta suxufiyiunta kula hadlayey Hargeysa ayuu, sidoo kale, sheegay in wada-hadalka Somaliland iyo DFS uu ku bilowday go’aan qaran, sida uu hadalka u dhigay, wuxuuna yiri “Waxaan soosaarnay qodobo, madaxwaynaha ayaana qaaday oo geeyay Itoobiya iyo Jabuuti, kadib waxaa sidaa ku bilowday wada-hadalka DFS iyo Somaliland, oo ahaa go’aan qaran” .
Feysal waxa uu ka jawaabayaa hadal uu sheegay Madaxwaynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, oo maalmo kahor, isagoo booqanaya magaalada Burco, sheegay in ay hakiyeen wada-hadaladii u dhexeeyay iyaga iyo DFS, wuxuuna ku adkeystay ineysan wax wada-hadal ah lagalayn DFS, “ilaa ay aqoonsadaan” buu yiri “madax-banaanideena”.
“Waxaan dooneynaa inaan wada-hadal iyo nabad ku kala baxno, laakiin inamada maanta Xamar ka talinaya wey la noqon weyday” ayuu yiri Madaxweyne Biixi. Waxa uu sheegay in ay DFS kula hadli karaan iney dal ahaan u aqoonsato Somaliland oo kaliya.
Sidoo kale, Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulkaas, Baashe Maxamed Faarax, ayaa sheegay in ay dhibaato kasoo gaartay wada-hadaladii ay la bilaabeen DFS, sidaa darteedna ay joojiyeen wada-hadal dambe. “Soomaaliya wax inaga yaal ma jiraan, wax noo yaalana ma jiraan. Wada-hadaladii aan la bilownay qasaaraa inaga soo gaartay, wax faa’idaa oo laga gaaray majirto. Waxaan soojeedinaynaa in lagu noqdo sidii hore” ayuu yiri Guddoomiye Baashe.
Wada-hadalada Somaliland iyo DFS waxay soo bilowdeen xiligii Dowladdii Kumeel-Gaarka ahayd ee Shariif Sh. Axmed, hase ahaatee waxay Somaliland dhawr mar dibadda ku kulmeen Dowladdii Xasan Sheekh, waxayse Somaliland ay dhawaanahaan eed ka sheeganeysay Dowladda Farmaajo. Markasta Somaliland wey saluugsanaayeen sida ay DFS wax u dooneyso, waxayna ku celcelisaa iney tahay “Qaran Madax-Banaan”.